अब्दुल्लाहले साफपछि नेपाली टोली नहेर्ने, राजीनामा दिने घाेषणा Canada Nepal
अब्दुल्लाहले साफपछि नेपाली टोली नहेर्ने, राजीनामा दिने घाेषणा
काठमाडौं - नेपाली फुटबल राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताईरीले मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने भएका छन् ।
बुधबार साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बंगलादेशसँग बराबरी खेल्दै पहिलो पटक नेपाललाई फाइनलमा पुर्‍याएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले खेलपछिको प्रेस कन्फरेन्समा नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिने बताएका हुन् । उनले साफ च्याम्पियनसिपपछि आफू नेपाल नआई सोझै कुवेत फर्किने बताएका छन् ।
अल्मुताइरीको प्रशिक्षणमा बुधबार नेपालले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा पहिलो पल्ट फाइनल यात्रा तय गरेको छ । फाइनल पुग्न एक अंक आवश्यक्ता रहेको अवस्थामा बंगलादेशलाई अन्तिम समय बराबरीमा रोक्दै नेपाल पहिलो पटक साफको इतिहासमा २८ बर्षपछि फाइनल पुग्न सफल भएको हो ।
यस अघि गत फागुनमा नेपाल झरेका अब्दुल्लाह चैतमा मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा भित्रिएका थिए । पछिल्लो समय एन्फा विबादमा मुछिएका अब्दुल्लाहले बारम्बार मुख्य प्रशिक्षक जिम्मेवारीबाट हट्ने बताउँदै आएका थिए । न्युज कारखाना
आश्विन २८, २०७८ बिहिवार ०६:१६:५६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - इंग्ल्यान्डले आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा विजयी सुरुआत गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा साविक विजेता वेस्ट इन्डिजलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्डले सुखद सुरुआत गरेको हो ।
वेस्ट इन्डिजले दिएको ५६ रनको सामान्य लक्ष्य इंग्ल्यान्डले ८ ओभर २ बलमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । इंग्ल्यान्डको जितमा जोस बट्लरले अविजित रहँदै २४ रन बनाए ।
वेस्ट इन्डिजका अकिल होसेनले २ तथा रभी रामपालले १ विकेट लिए । यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले १४ ओभर २ बलमा अलआउट हुँदै ५५ रन बनाएको थियो । वेस्ट इन्डिजका लागि क्रिस गेलले सर्वाधिक १३ रन जोडे । वेस्ट इन्डिजलाई सस्तैमा समेट्न इंग्ल्यान्डका आदील राशिदले ४ विकेट लिए ।
यससँगै इंग्ल्यान्डले पहिलो पटक टी-ट्वान्टी विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउन सफल भएको छ । जितसँगै सुपर १२ को समूह १ मा रहेको इंग्ल्यान्डले २ अंक जोडेको छ । वेस्ट इन्डिजले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुआत गरेको छ ।न्युज कारखाना
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार ०७:१७:२४ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - शनिवार राति जर्मन बुण्डेसलिगा अन्तर्गत भएको खेलमा बायर्न म्युनिखले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा बायर्न म्युनिखले होफेनहेइमलाई ४-० गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलमा बायर्नको लागि रोबर्टो लेवाण्डोस्कीसँगै सेर्जी जिनाब्री, इरिक म्याक्सिम र किङस्ले कोम्यानले एक एक गोल गरे ।
यस्तै शनिवार कै अर्को खेलमा बोरुसिया डर्टमण्डले नवप्रवेशी अर्मेनिया बेलेफिल्डमाथि ३-१ गोलको जित निकालेको छ ।
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार ०७:५३:३८ बजे : प्रकाशित
# बायर्न म्युनिख
# जर्मन बुण्डेसलिगा
काठमाडाैं - युएई र ओमानमा जारी टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा आइतबार भारत र पाकिस्तान खेल्दै छन्। विश्वकपको सुपर १२ अन्तर्गत आज साँझ ७ः ४५ मा दुबई इन्टरनेसनल स्टेडियममा यी दुई टीम भिड्ने छन्।
पाकिस्तान क्रिकेट टीमले कति बेला कस्तो प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्नँ। बलियो टीमलाई हराउन सक्ने र कमजोर टीमसँग पराजित हुने पाकिस्तानी क्रिकेटको विशेषता हो। २००९ को विश्वकप विजेता पाकिस्तान यसपटक फेरि उपाधि हात पार्ने दाउमा छ।
आइतबार उसले कट्टर प्रतिद्वन्द्वी भारतविरुद्ध प्रतिष्प्रदा गरेर विश्वकपको पहिलो खेल खेल्दैछ। टी-२० विश्वकपमा भारतविरुद्ध पाकिस्तानी टोलीको कीर्तिमान निकै खराब छ। टोलीले अहिलेसम्म पाँच खेल खेलेको छ र पाँचै खेलमा भारतसँग हार बेहोरेको छ।
तर, यो विश्वकपमा युएईको अवस्थामा पाकिस्तानको टोली खतरनाक सावित हुन सक्छ किनभने उनीहरूसँग खेल्ने धेरै अनुभव छ। पाकिस्तानका धेरै खेलाडीहरू छन् जो भारतका लागि खतरा बन्न सक्छन् र यदि यी खेलाडीहरूले राम्रो गरे भने पाकिस्तानले विश्वकपमा भारतविरुद्ध पहिलो जीत हासिल गर्न सक्छ। आज हामी तीन पाकिस्तानी खेलाडीको बारेमा उल्लेख गर्दैछौं, जो भारतका लागि खतरा साबित हुन सक्छन्।
पाकिस्तानका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवानले भारतविरुद्धको खेलमा ओपनिङ गर्ने भएका छन्। रिजवानले पहिलो ओभरमा छिटो रन बनाएर विपक्षी बलरहरूलाई दबाब दिने प्रयास गर्ने छन्।
रिजवानले ४३ खेलमा ४८.४० को औसतमा १०६५ रन बनाएका छन् भने एक शतक र आठ अर्धशतक आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। रिजवानमा ठूलो स्कोर बनाउने क्षमता छ। यदि भारतीय टोलीले उनलाई सुरुमै आउट गरेन भने भारतका लागि समस्या बढ्नेछ।
२. शाहीन शाह अफ्रिदी
भारतीय दायाँ हाते ब्याट्सम्यान फास्ट बलरसामु निरही हुने कुरा सर्वविदित छ। र, यसलाई ध्यानमा राख्दै फास्ट बलर शाहीन शाह अफ्रिदी पाकिस्तानका लागि ट्रम्प कार्ड साबित हुन सक्छन्।
शाहिनसँग खुल्ला ओभरमा बल स्विंग गर्ने क्षमता छ। उनले भारतीय शीर्ष अर्डरको ब्याट्सम्यानका लागी धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छन्। यदि शाहीनले उद्घाटन ओभरमा भारतको विकेट लिए भने पाकिस्तानको लागि बाटो सजिलो हुन सक्छ।
१. बाबर आजम
पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम र भारतीय कप्तान विराट कोहलीको तुलना बारम्बार हुने गरेको छ। पाकिस्तानी टीमका लागि विराट कोहलीको रूपमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। बाबर आजमलाई टी-२० क्रिकेटको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी मानिन्छ।
उनले टी-२० मा लगातार राम्रो प्रदर्शन गरेर आफूलाई प्रमाणितसमेत गरिसकेका छन्। बाबरले पाकिस्तानका लागि ६१ टी-२० खेलमा २२ सय चार रन बनाएका छन् भने उनको नाममा एक शतक र २० अर्धशतक रहेको छ। बाबर आफ्नो शानदार प्रदर्शनका कारण भारतका लागि एक ठूलो खतरा साबित हुन सक्छन्। बाबर आजमको विकेट भारतको दृष्टिकोणबाट धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ।न्युज कारखाना
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार १४:५७:३७ बजे : प्रकाशित
भारतको जीतका लागि चण्डीगढमा हवन पूजा
एजेन्सी - सन् २०२१ को टी–२० विश्वकप क्रिकेट यूएई र ओमानमा जारी छ। २४ अक्टोबर अर्थात आज साँझ ७ः४५ मा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तान खेल्दै छन्। विश्वभरका आमनागरिक उत्सुकतासँग यो खेल पर्खिरहेका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीचको खेल क्रिकेट म्याच मात्र नभएर दुई देशको प्रतिष्ठाको विषय समेत बन्ने गरेको छ । यहीँ कारण समर्थकहरूले भारतीय टीमको जीतको लागि चण्डीगढमा हवन पूजा गरेका छन् । समर्थकहरूले आइतबार दिउँसो भारतीय टोलीको जीतको कामन गर्दै चण्डीगढस्थित सेक्टर–३० को शीव मन्दिरमा हवन पूजा गरेका हुन्।
हवनमा वृद्धवृद्धासँगै बालबालिका समेत सहभागी छन् । यस क्रममा बालबालिकाहरूले हातमा भारतीय खेलाडीहरूको पोस्टर बोकेका थिए । भारतीय टोलीको जीतका लागि यो हवन गरेको स्थानीय यादवेन्द्र मेहताले बताए । उनले भारतीय टोलीको जित निश्चित रहेको दावी पनि गरे ।
भारत–पाकिस्तानबीतको खेल हेर्न विभिन्न सहरमा ठूला स्क्रिन पनि जडान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को कुनै पनि प्रतियोगितामा भारत र पाकिस्तानबीचको खेल आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्छ । न्युज कारखाना
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार १५:१६:०६ बजे : प्रकाशित
सलाहले ह्याट्रिकमा लिभरपुरको जित
काठमाडौं - आइतबार इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत भएको खेलमा लिभरपुरले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा लिभरपुरले म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई ५-० गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलमा लिभरपुरका लागि मोहम्मद सलाहको ह्याट्रिक गरे ।
युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा सलाहले ह्याट्रिक गोल गर्दा, नबी केइट र डिअगो जोटाले एक एक गोल गरे । पहिलो हाफमै ४ गोल गरेको लिभरपुरले दोस्रो हाफमा थप १ गोल गरेको थियो ।
यससँगै लिभरपुल अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा र ९ खेलमा २१ अंक जोडेको छ । युनाइटेड भने सातौं स्थानमा रहेको छ ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार ०७:३२:४५ बजे : प्रकाशित
एएफसी यू–२३ : नेपाल र इराक भिड्दै, कति बजे हुँदैछ ?
काठमाडौं - एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटको पहिलो खेलमा आज (सोमबार) नेपालले बलियो टिम इरानविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । ताजिकिस्तानको रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा नेपालले इरानको सामना गर्न लागेको हो । खेल नेपाली समयअनुसार अपरान्ह ४ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
फिफा बरियतामा एसियाको शीर्षस्थानमा रहेको इरानविरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा हुनेछ । नेपाल कम्तिमा इरानलाई रोक्ने दाउमा हुनेछ । खेलअघि प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र कप्तान अर्पण कार्कीले राम्रो नतिजाको लागि खेल्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो दुई संस्करणमा नेपालको प्रदर्शन यस प्रतियोगितामा राम्रो हुन सकेको छैन । खेलेका ६ खेलमा हार ब्यहोरेको नेपालले कुनै पनि गोल गर्न सकेको छैन । यसपटक राष्ट्रिय टोलीका नियमित ६ र बाँकी पाँच खेलाडी बोकेर ताजकिस्तान उडेको नेपाली टोली उच्च मनोबलकासाथ इरानबिरुद्ध खेल्दै छ ।
नेपालले यू–२३ एसियन कप छनोटमा इरानसँग दोस्रो पटक खेल्न लागेको हो । यसअघि नेपालले सन् २०१५ मा इरानसँग उसैको घरेलु मैदानमा खेलेको थियो । त्यस खेलमा इरानले नेपाललाई ५–० ले पराजित गरेको थियो ।
नेपालको समूह ‘बी’को दोस्रो प्रतिद्वन्द्वी हो आयोजक ताजकिस्तान । फिफा बरियतामा ११८औँ स्थानमा रहेको ताजकिस्तानसँग नेपालले ११ गते खेल्नेछ । यस्तै, तेस्रो प्रतिद्वन्द्वी लेवनानसँग नेपालले १४ गते खेल्नेछ । समूह बिजेता फाइनल चरण छनोट हुनेछ ।न्युज कारखाना
नेपाली २३ टोली :
गोलरक्षक– अर्पण कार्की (कप्तान), विशाल सुनार, अभिषेक बराल
डिफेण्डर– सुमन अर्याल, गौतम श्रेष्ठ, राजन गुरुङ, रन्दीप पौडेल, शिव गुरुङ, अनिल महर्जन, अभिषेक लिम्बू
मिडफिल्डर– नितिन थापा, सुरजजिउ ठकुरी, आयुष घलान, सेसेहाङ आङदेम्बे, शिशिर लेखी, आकाश बुढामगर, रोशन पहाडी, एरिक बिष्ट
स्ट्राइकर– ऋतिककुमार खड्का, मनीष डाँगी, अभिषेक रिजाल, दर्शन गुरुङ, राजिव लोप्चन
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १०:३६:०९ बजे : प्रकाशित
# एएफसी यू–२३